दुई वर्षदेखि वीर अस्पतालमा रेडियोथेरापी सेवा बन्द – Everest Dainik – News from Nepal
दुई वर्षदेखि वीर अस्पतालमा रेडियोथेरापी सेवा बन्द
काठमाडौं, साउन ८ । वीर अस्पतालमा गत वर्ष क्यान्सर रोगपीडित करिब ६ सय बिरामी भर्ना भए । यीमध्ये ४ सय ५० लाई रेडियोथेरापी गर्नुपर्ने भयो । तर, रेडियोथेरापी नहुँदा उनीहरूले उपचार पाएनन् । दुई वर्षदेखि वीरमा रेडियोथेरापी मेसिन छैन । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
‘उपचारका लागि आएका प्रायः विपन्न वर्गका थिए, हामीकहाँ मेसिन नहुँदा उनीहरूको उपचार गर्न सकेनौँ,’ वीर अस्पताल क्यान्सर विभाग प्रमुख डा. विवेक आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यहाँ आउने बिरामीमध्ये अधिकांशलाई रेडियोथेरापी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हामीकहाँ यो सुविधा छैन । बाध्य भएर बाहिर रिफर गरेका छौँ, उनीहरूले उपचार गरे–नगरेको हामीलाई थाहा हुँदैन ।’
अहिले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, नेपाल क्यान्सर अस्पताल र काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरसँग मात्र रेडियोथेरापी सेवा उपलब्ध छ । वीरले यो सेवा पाँच हजार रुपैयाँमा दिँदै आएको थियो । अन्य अस्पतालले यति शुल्कमा रेडियोथेरापी गर्दैनन् । ‘दुई वर्षअघि हामीले पाँच हजारमा सेवा दिँदा पनि धेरै बिरामीले तिर्ने अवस्था थिएन,’ वीरका चिकित्सक डा. आचार्यले भने । निजी अस्पतालले रेडियोथेरापीका लागि बिरामीसँग दुई लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।
सरकारले वीर अस्पताललाई जनताको अस्पताल बनाउने लक्ष्यअनुसार अत्याधुनिक टोमोथेरापी मेसिन किन्ने भएको छ । यो संसारकै अत्याधुनिक उपकरणमध्ये हो । ४० करोड मूल्य पर्ने सो मेसिन किन्न अर्थ मन्त्रालयले पैसा निकासा गरिसकेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का रजिस्ट्रार डा.किरण मानन्धरले बताए । अमेरिकाको एकुरे नामक कम्पनीसँग किन्न लागिएको टोमोथेरापी कम्पनीले सो मेसिन अबको तीन महिनामा ल्याउनेछ । सो मेसिनबाट दैनिक ३० जना बिरामीलाई केमो दिन सकिने डा.आचार्यको भनाइ छ ।